Ratko Mladic oo maxkamad la soo taagayo, isagoo loo haysto dembiyadii dagaal ee uu ka geystay dalka Bosnia. – Radio Daljir
Huge, May 16 – Taliyihii ciidamada seerbiyiinta Bosnia Ratko Mladic ayaa lagu wadaa in maxkamad la soo taago, isagoo loo hayto 11 dembi oo ka dhana ah aadanaha , oo uu ka mid yahay xasuuuq dagaal.
Taliyahani ayaa ah ninkii ugu sarreeyey ee ka qaybqaatay dagaaladii dhulka Balkans-ka ee sagaashamaadkii,xilligaasi oo Seerbiyiintii Bonsia oo gacan ka helayey dowladda Serbia ay xasuuq ka geysteen dalkaasi Bosnia.
Ninkan ayaa la rumeysanyahay inuu soo agaasimay xasuuqii lagu dilay ilaa todoba kun oo muslimiin ah oo ka dhacay degaanka sherbaniiza sanadkii 1995tii.
Taliyahaasi ayaa sidoo kale ku eedaysan in uu 44 maalmood go?doomiyey magaalada Sarajevo ee xarunta dalka Bosnia.
70-jirkaan oo 15 sano baxsad ku jiray isagoo kaga cararayey cadaaladda,laakiin dowladda Serbia ayaa ku guulesatay in ay soo qabato oo u gudbiso maxkamadda The Hgue.
Taliyahii Bosniyiinta Serbia ayaa lagu hayey maxkamadda denbiydda dagaalka ee The Hague ,waxaana uu isu arkaa hogaamiye adag ,isagoo dafirsan denbiyadda loo haysto